10 talo oo ku saabsan waalidnimada - BBC News Somali
10 talo oo ku saabsan waalidnimada
31 Luulyo 2019
Qof dhaqaalaha ku taqasusay muxuu inooga sheegi karaa arrimaha waalidnimada? Prof. Emily Oster ayaa isu geysay boqollaal cilmi baaris oo la xiriira waalidnimada, waxayna dib u eegtay macluumaadka. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyiinka ay soo jeedisay iyo macluumaadka la socda.
Nolosha maalinlaha ah ee waalidiinta waxaa buuxdhaafin kara walwal. Waxaa jiro su'aalo badan: Ma maryo ayaad ku duubeysaa canugga? Immisa saacadood baad canuggaaga u ogolaaneysaa inuu shaashadaha daawado?
Waxaa jiro talooyiin badan oo isdiidan oo waalidiinta ay ka helayaan dhaqaatiirta, qoysaska, saaxiibbada, buugaagta iyo internet-ka, mararka qaarna dad aysan aqoon u lahayn, taas oo waalidka ku qasabto in aysan kala garan waxa ay aaminaan iyo ficilka ay sameyn karaan.
Emily Oster, oo arrimaha dhaqaalaha ka dhigta jaamacadda Brown ee Mareykanka, Markii ay uurka lahayd waxay ku wareertay talooyiinka isdiidan ee dad kale ay ka heshay.
Waxay go'aansatay in ay isticmaasho tababarkeeda xisaabta, si ay dib u eegis ugu sameyso arrimaheeda caafimaadka, waxayna cadeynta isugu geyso buuggeedii ugu horreeyay. Wax wanaagsan ayey ka fileysay Arrimaha la sameeyo iyo kuwa aan la sameyn xilliga uurka
Hadda, waalid ahaan, isla arrimahaas ayey ku qortay buuggeedii ugu dambeeyay oo ku saleysan macluumaad kugu hagi kara wanaag iyo waalidnimo aad u xasillan.
Waa kuwan talooyiinkeeda ugu muhiimsan:
1. Naas-nuujinta dhib ma aha sida dadka qaar ay la tahay
"Waxaa jiro macluumaad taageeraya in naas-nuujinta ay kaalmo u tahay caafimaadka canugga sida - yareynta finanka ka soo baxa, calool xanuunka iyo ka hortagga caabuqa dhegaha - balse macluumaadkan ma cadeynayaan in arrintan ay tahay faa'iidada muddada fog."
"Carruurta muddada la naas-nuujiyay kama caqli badna kuwa kale, ama arrintan ma yareyneyso halista ay u gali karaan cayilka, kansarka ama xannuunka macaanka," ayey tiri Oster.
Waligaa ma maqashay carruur mataana ah balse kala aabe ah?
Caano carruur oo caan ah oo la ogaaday in ay sumaysan yihiin
"Sikastaba, naas-nuujinta waxay yareysaa kansarka horaadada ee hooyooyiinka ku dhici kara. Sida cilmi-baarisyo badan lagu ogaaday, waxay u muuqataa in xiriir aad u weyn uu ka dhexeeyo labada arrimood, waxaana suuragal ah in 20-30 boqolkiiba ay yaraaneyso halista kansarka haddii carruurta la nuujiyo.
2. Haddii laguu qoro kaniinka walwalka, waad liqi kartaa
Sida ay sheegtay Oster, "Maadaama dawooyiinka loo isticmaalo walbahaarka aysan ku wajahneyn caanaha naaska, waxaa yar cadeynta muujineysa in dhibaato ay canugga u geysan karaan. Cudurada sababa walwalka ee foosha ka dib waa halis, in la daweeyana waa muhiim.
Waana in aad dhaqtarkaaga kala tashataa dhibaatooyiinka caafimaadka.
3. Faa'iidada in bilaha ugu horreeya uu canugga qolka kula seexdo
Machadka Mareykanka ee Pediatrics ayaa soo jeedinaya in carruurta ay waalidkooda la seexdaan lixda bilood ee ugu horreeya. Waxaana habboon in illaa sannad ay noqoto, si loo wehliyo, loogana hortago dhibaatada sababi karta in canugga uu dhinto. Waana faa'ido fiican in dhanka canugga loo jeestay habeenkii, bilaha ugu horreeya, ayey tiri Oster.
"Haddii aad dooneyso in canugga uu kula seexdo, waxkastoo ay noqoto, sidaa samee. Waxaa jiri karo macluumaad ka digaya in qolkaaga uu kula wadaago canugaaga. Balse waa in dadka loo sheego in carruurta ay qolka kula seexdaan illaa sannad ay ka gaarayaan, adigoo eegaya guusha hurdada fiican ee xilliga dhow iyo midka fog ee ilmaha, iyadoo aysan jirin cadeyn dhab ah oo arrintaas muujineysa, balse waxaa suuragal ah in aysan arrin fiican noqon karin."
4. Waa halis in carruurta ay sariir kula seexdaan qof qaangaar ah
"Sida ka muuqata dhammaan cilmi-baarisyada meel kasta laga sameeyay, halka arrin ee ka soo baxay wuxuu yahay: Marka canug uu sariir kula seexdo qof weyn, in 20 illaa 60 jeer ay sare u qaadeyso halista ah in canuggaas uu dhinto. Hala seexan haddaba."
5. Ma ku duubi kartaa maryo?
Haa. "in maryo lagu duubo canugga waxay yareysaa oohinta, waxayna badisaa hurdada, bilaha ugu horreeya. Waa muhiim in marada loogu xiro qaab uu canugga lugaha u dhaqaajin karo," ayey tiri Oster.
6. Tallaal canuggaaga!
"Tallaalka carruurnimada waa mid wanaagsan, waxaana looga hortagaa cudurro kala duwan oo ku dhici kara canugga."
7. Way wanaagsan tahay hurdada
Ka dib markii ay eegtay boqollaal cilmi baaris, Oster waxay ogaatay in "Hababkan ay wax ku ool yihiin, ayna gacan ka geysanayaan caafimaadka maskaxeed ee waalidka, dhibaatana uma geysaneeyso canugga. Samee, hana ka xumaan arrintaa!
"Hurdada in aad isbarto waxay sidoo kale yareyneysaa walwalka umusha ka dib. Hababkan hurdada waxay si joogto ah u xoojinayaan maskaxda waalidka; sida walbahaar yar iyo lamaane faraxsan oo isku qanacsan."
8. In guriga la joogo ama in la baxo?
"Waalidka way ka faa'idayaan in fasaxa umusha ay qaataan. Balse waxaa jirto cadeyn aad u yar oo muujineysa in waalidiinta guriga iska jooga ay saameyn xun iyo mid sanba ku leeyihiin carruurta."
9. Carruurta ka yar laba sano, waxbadan kama baran karaan TV-ga
"Ilmaha ay da'dooda u dhexeyso seddax illaa shan sano, wax ayey ka baran karaan TV-ga sida ereyada iyo heesaha carruurta," ayey tiri Oster.
"Daawashada TV-ga saameyn kuma yeelaneyso tijaabada canugga. Cadeynta ugu wanaagsan waxay soo jeedineysaa in si gaar ah uu canug u daawado TV, in aysan saameyn ku yeelaneyn caqliga, xitaa haddii uu aad u yaryahay. Balse lama hayo caddeynta teleefoonada casriga ah iyo muddada uu shaashadda daawan karo."
10. In canugga aad wax la akhriso waa arrin aad u fiican
"Halkii aad adiga uun buugga u akhrin laheyd, su'aalo badan weydii canugga: 'Halkee shirbirta hooyadeed ay joogtaa?' 'Maxay kula tahay in yaanyuurta koofida xiran ay dareemeyso?'" iyo su'aalo la mid ah.
Maqal Carruur qabta xanuunnada wadnaha oo laga qaaday Gaarisa si loo daweeyo
17 Oktoobar 2016
Carruur la la'aa oo ayagoo nool laga helay bohol
3 Luulyo 2018
Maraykanka oo si uu yeelo garan la' carruur soogalooti ah oo waalidkooda la tarxiilay
Dowladda Islaamiga: Dumar iyo carruur ay cidna rabin